जनप्रतिनिधि र डाक्टरको ‘बिजनेस’ : नक्कली नाता प्रमाणित गरेर मिर्गौला प्रत्यारोपण
२०७७ असार २८ आइतबार ०४:०५:००
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा नाता नै नपर्ने व्यक्तिलाई आफन्त बनाएको आरोपमा प्रहरीले वडाध्यक्षसहित चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको चितवनस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका तीन चिकित्सक तथा कानुनी सल्लाहकारलगायतलाई पक्राउ गरेको हो ।
ब्युरोको टोलीले चिकित्सकहरू डा. राकेशकुमार बर्मा, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ र डा. बालकृष्ण कालाखेती तथा अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार रमेश काफ्लेलाई पक्राउ गरिएको छ । त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष गोपाल महर्जन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनका अधिकृत रामचन्द्र ढकाल पनि पक्राउ परेका छन् । साथै मिर्गौला खरिद–बिक्रीमा संलग्न गिरोहका व्यक्तिहरूसमेत पक्राउ परेका छन् ।
केही महिनाअघि ललितपुरका एक व्यक्तिको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । भोजपुरका एक व्यक्तिले मिर्गौला दिएका थिए । नजिकको नातेदारले मात्रै मिर्गौला दिन पाउने भए पनि उनलाई नातेदार भएको नक्कली कागजपत्र बनाएर प्रत्यारोपण गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । यसमा अस्पतालको मिलेमतो रहेको प्रहरीको दाबी छ ।
त्यस्तै, वडाध्यक्ष महर्जनले नाता नै नपर्ने व्यक्तिलाई नाता प्रमाणित गरेको र अधिकृत ढकालले मिर्गौला प्रत्यारोपणमा कागजपत्र र मान्छे प्रमाणित गर्दा अनियमितता गरेको प्रहरी आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार सुरुवातमा यसबापत मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसमध्ये १० लाख मिर्गौला दिने व्यक्तिलाई दिइने बताइए पनि उनले दुई लाख रुपैयाँ मात्र पाएका थिए । त्यसपछि पीडित व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । पीडितको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलियाले बताए ।
प्रहरीका अनुसार यसअघि भारत लगेर मिर्गौला किनबेच हुने गरेको थियो । अहिले भने नेपालमै प्रत्यारोपण हुन थालेपछि नाता प्रमाणितको नक्कली कागजपत्रका आधार मिर्गौला किनबेच हुन थालेको प्रहरीले जनाएको छ ।
#नक्कली नाता प्रमाणित # कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस
कांग्रेसमा भावी सभापति को र कस्तो ?
‘द भल्चर एन्ड द लिटल गर्ल’
काठमाडौं उपत्यकाका थप ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि
प्रदेश १ मा ५७ जना कोरोना संक्रमित थपिए, कुल संक्रमित एक हजार एक सय २८ पुग्यो
मलेसियामा निर्घात कुटिएका पीडित र कुट्ने पीडक दुवै दूतावासकाे सम्पर्कमा, पीडक स्थानीय प्रहरीमा उपस्थित
एसिड छ्याप्नेविरुद्ध दण्ड–सजाय कडा बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन
जापानी दूतावासबाहिर ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेको भिड
समुदायमा महामारी फैलन थालेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन प्रदेश १ सरकारको अपिल